DALKA SUGAR 45 RBU 12.5K
DALKA SUGAR 45 RBU 25K
DALKA SUGAR 45 RBU 50K
DALKA SUGAR 45 RBU 75K
DALKA SUGAR 45 RBU 100K
MADAXWEYNAHA OIL & GAS
BULSHADAADA WAA MACAAN MUWAADINIINA
SI Group waa shirkad caalami ah oo suuqgeyn iyo badeecad sameyne ah oo leh khibrad kabadan 20 sano. SI Group waxay leedahay shabakad xiriiryo kala duwan oo adduunka oo dhan leh awood ay ku siiso waddan ama shirkad sida saxda ah ee ay u baahan yihiin. Waxaannu gacanta ku haynaa weelka iyo shixnadaha badan ee Badeecadaha Soft-ka ah ee loo yaqaan 'Bariiska, Sonkorta, Soybean, Corn' iwm waxaanan ku helnaa sahayno cusub suuqyada soo baxaya. SI Group waxay gacan ka geysan kartaa abuurista suuqyo aan waligood horay uga jirin dalal badan iyagoo ka caawinaya dowladaha inay soo bandhigaan dalagyo cusub iyo howlo dib u warshadeyn si loo keeno suuq caalami ah. Xor baad utahay inaad nala soo xiriirto codsiyada qaaska ah ee badeecad kasta oo jilicsan maadaama aan awood u yeelan karno inaan ka soo saareyno.
Badeecadaha adag sida Iron Ore, Dhuxul, Birta xoqida, Naxaasta iyo Saliida ayaa la caddeeyay oo la heli karaa in kasta oo ay yihiin kooxda SI Group. Waxaan xiriir fog la leenahay dowladaha iyo ganacsatada adduunka oo noo oggolaanaya inaan ku bixinno badeecado macquul ah qiimo macquul ah. SI Group waxay xushmeyneysaa dhamaan shirkadaha aan ka shaqeyno si aan u hubinno inay awood u leeyihiin inay si guul leh ugu dhammaystaan ​​macaamil ganacsi. Waxaan matalnaa iibsadayaasha iyo iibiyaasha waxaanan u helnaa xalka labadaba, haddii aad tahay alaab-qeybiye raadinaya dhagaystayaasha adduunka oo dhan iyo koox adag oo suuq geynaysa badeecadaada maanta nala soo xiriir.
SI Group waa alaab-qeybiyeyaal Iron Iron, copper, Dhuxul, Birta duug ah, Saliida iyo wax soo saarka beeraha adduunka.
Nagala soo xiriir maanta info@sigroupco.com iyo inaad jawaab ka hesho 24 saacadood gudahood.
Astaanta SI Group waxaa loo sameeyay lagana abuuray Switzerland si ay u muujiso badeecado qaali ah oo u taagan gaduud sidii dhagax qaali ah. Badeecooyinkan qaaliga ah ee laga helay adduunka oo dhan oo ka imanaya dhulka waxaa loo diyaariyey loona keenaa adduunka oo dhan markab dushiisa oo ku baahsan adduunka oo dhan. Qalinku wuu ku xidhan yahay badeecada casaanka ah waxay matalaysaa maraakiibta iyo qaababka loo mari karo shanta badeed ee aduunka.
Xuquuqda daabacaadda © 2020 | SI Group | Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.